Ifektri yaseChina Ekhombisa Izinsiza kusebenza, Umhlinzeki Wezinsimbi Ohambisa Imishini
Ikheshi lethu le-premium TDTG yebhakede lingenye yezixazululo zokonga kakhulu ukuphatha imikhiqizo eyimbudumbudu noma eyimpuphu. Amabhakede agxiliwe emabhande aqonde phezulu ukudlulisa impahla. Izinto zokwenziwa zifakwa emshinini kusuka phansi bese zikhishwa phezulu.
Ukuhanjiswa kwamaketanga kufakwe isango lokuchichima nokushintshwa komkhawulo. Isango lokuchichima ligxunyekwe ekhejini ukugwema ukulimala kwemishini. Iphaneli yokusiza yokuqhuma itholakala engxenyeni eyinhloko yomshini.
Imishini yokugaya ufulawa i-TLSS chungechunge i-tubular screw conveyor isetshenziselwa ukondla okulinganiselwe kufulawa wesigayo nasesigulini sokuphakelayo.
Njengomshini wokucubungula okusanhlamvu wendawo yonke, lo mshini odlulisayo usetshenziswe kabanzi embonini yokucubungula okusanhlamvu, isitshalo samandla, amachweba nezinye izikhathi zokudlulisa i-granule, i-powder, i-lumpish noma i-bagged materials, okusanhlamvu, amalahle, okwami, njalonjalo.
Ukuhanjiswa kwebhande kusetshenziswe kabanzi okusanhlamvu, amalahle, okwami, imboni yamandla kagesi, amachweba neminye imikhakha.
Imanyuwali yemishini yokugaya ufulawa nesango le-pneumatic slide lisetshenziswa kakhulu esitshalweni sikakolweni nakuwoyela, isitshalo sokucubungula okuphakelayo, isitshalo sesamente, nesitshalo samakhemikhali.